Franc App – Page 2 – iAfrika
Uma uphupha ukuthi kunesivunguvungu kuwuphawu lweshwa kuwe futhi kufanele uqaphele okwesikhashana. Uma kunokuduma nombani okuningi kusho ukuthi kuzoba noshintsho empilweni yakho – ungaphumelela emsebenzini kodwa futhi ungabhekana nemiphumela engalindelekile ezenzweni zakho. Ikakhulukazi kuyinhlanhla ukuphupha ngokuthi ushaywe umbani. Amaphupho ngomoya. Amaphupho ngemvula.
Izithakazelo zakwa Nzama
Wosiyane, Gcugcwa, Mashiza, Dingila, Mkhandi wensimbi, Nina enidume ngokugcagca insimbi amanye amakhosi edume ngesithembu, Wena owawela ngelibanzi kwasala izindondo zacoshwa abafokazane, Nina bakwamfazi kashaywa ngemvubu kodwa ushaywa ngombhombolo wesidwaba, Zukula kaNombhoco, Gcugcwa kaNcameni, Ncameni kaNozaca, Nina baseNtendeni! Nawu umlando wakwaNzama.
Tags Clan names, Nzama
Izithakazelo zakwa Dube
Dube elimthemde, Dube kaBayisa, Khushwayo! Mbuyazi kaThekeli Ongathekeli nakwandodakazi UZwakele ndoda Ongathekel’ emzin’ emincane Othekel’ emzin’ emikhulu Ongathekeli kwamakhelwana Othekel’ emanxulumeni Nina bakwaDonda kwaMbangambi Ndlovu khaliphezinye zilibele Nina bakwaNzwakele kaKhushu Nina beshumi lamhla munye Nina bakwaMagwaz’ ebuyelela Nina beqhawe lakwaLindukudla Shozi! KaFani kaNomkhwayiba KaFana fuzamafu Dlubuladledle! Ntamo ngeyendlondlo KaSiphabantu ngokubadlubulela Ngeze ngonyama entanyeni Ngoba yehle … Read more
Tags Clan names, Dube
Mnguni,Qwabe,Mnguni kaYeyeye,Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendabaAbathi “dluya kubeyethwe”,Kanti bahlinza imbuzi,Bathi umlobokazi ubeyethe kuyikhuni,Sidika lolodaba,Phakathwayo!Wena kaMalandela,Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,Amazala-nkosi lana!Mpangazitha!KaKhondlo kaPhakathwayoAbadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendabaBethi dluya kuyabeyethwaAbalw’ impi noShakaWath’ uShaka makusikw’ ugebheziLwekhand’ aphuze kulona.Mgwaqo!Khuzwayo!Makhanya! Inguqulo 2 Mnguni!Qwabe!Mnguni kaYeyeyeKaKhondlo kaPhakathwayoAbadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendabaBethi dluya kuyabeyethwaAbalw’ impi noShakaWath’ uShaka makusikw’ ugebheziLwekhand’ aphuze kulona.Mgwaqo!Khuzwayo!Wena kaMalandelaNgokuland’ izinkomo zamadodaAmazala nkosi lana,Mpangazitha!Makhanya!
Tags Clan names, Gumede
Uma uphupha ukuthi usembhedeni ukuthi lokho kusho ukuthini kuya ngokuthi uwenzani. Uma uphupha nhe ngombhede ongenamuntu phakathi izinkinga zakho zizophela maduzane. Uma uwendlala umbhede uzothatha uhambo maduzane. Uma ulele embhedeni uzoshada maduzane mawungashadile.
Uma uphupha ubona inja kuwuphawu oluhle uma iziphethe kahle futhi ikulalela ikakhulukazi uma kuwumdlwane. Uma inja ingaziphethe kahle ilwa noma iphula izinto kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho kungekudala, ikakhulukazi leyonkinga ivela kubantu abangathembekile. Uma inja ikuluma, kusho ukuthi kukhona umuntu okuzingelayo okungenzeka ukuthi ukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Uma uphupha inja ikhonkotha noma iklewula lokho … Read more
Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola. Ukuphupha uphiwa imali, futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlanhla ezayo. Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu oyithathayo kuwe, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna … Read more